पानी पार्न मोरङमा भ्यागुताको विवाह « News of Nepal
पानी पार्न मोरङमा भ्यागुताको विवाह
सरोज यादव, विराटनगर । मध्य असार बितिसक्दासमेत वर्षा नभएपछि वर्षा यतिबेला किसानहरु चिन्तित छन् । पानी नपरेपछि फुर्सदिला बनेका मोरङका किसानले वर्षा होस् भन्ने कामनासहित भ्यागुताको विहे गरेका छन् ।
मोरङ रंगेलीका किसानहरुले चिसाङ खोलाको किनारमा रहेको संसारी माईस्थान मन्दिरमा विधिवत रुपमा भाले भ्यागुता र पोथी भ्यागुताको विवाह गरेका हुन् । वैवाहिक कार्यक्रम नै बनाएर भ्यागुताको विहे गरेको स्थानीय किसानले बताएका छन् । भ्यागुताको विहे गरेपछि पानी पर्छ भन्ने विश्वासका आधारमा भाले र पाथी भ्यागुताको विधिवत रुपमा विहे गरिएको स्थानीय किसान रमेश यादवले बताउनुभयो ।
मन्दिरका पुजारीले वैद्धिक मन्त्र पढेपछि भाले भ्यागुताको तर्फबाट पोथी भ्यागुतालाई चुरा पोते तथा श्रृगारका सामान लगाएर वेहुलिझै सिगारिएको थियो । भ्यागुताको विवाह गर्दा वर्षा हुने जनविश्वास रहिआएकाले किसानहरु सामूहिक रुपमा भेला भई विवाह सम्पन्न गरेका हुन । रंगेली नगरपालिकाका ७ का रामचन्द्र मण्डल र मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष संजिव श्रेष्ठलेले वेहुला र वेहुली पक्षको भुमिका निर्वाह गर्नु भएको थियो ।
मण्डलले कृषिप्रधान मुलुुकमा पानी नपरेका कारण किसान निराश भएकाले केही उपाय नलागेकाले वर्षा गराउन सकिन्छ भनेर भ्यागुुतोको विवाह गरेको बताउनुुभयो । मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्रेष्ठले वर्षा गराउन विगतमा पनि इनारको विवाह, भ्यागुुताको विवाह गर्ने चलन रहेकाले पनि आफुुहरुले यस्तो वैवाहिक कार्यक्रम राखेको प्रष्ट पार्नुुभयो । कार्यक्रममा रंगेली, सुनवर्सी नगरपालिका तथा धनपालथान गाउँपालिकाका किसानको सहभागिता थियो ।
समयमा वर्षा नभएका कारण मोरङमा हालसम्म करिब २० प्रतिशतमात्र धान रोपाई भएको छ । अघिल्लो वर्ष मोरङमा यो अवधिमा ४० प्रतिशतभन्दा वढि रोपाई भएको थियो । यता १ नं. प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य एव लेखा समिति संयोजक शिवनारायण सिंह गनगाईले नहर र कुलो नपुगेका कृषकको समस्यालाई मध्यनगर गरेर कृषकहरुलाई सिचाईको सुविधा पुर्याउन आफूले पहल गरिरहेको बताउनुभयो ।
निरन्तर वर्षा हुने असार महिनामा वर्षा नभएपछि वर्षा हुने आशमा भ्यागुताको विवाह गरेको रगेलीका किसान ईश्वर पोखरेलले बताउनुभयो । असार तेस्रो साता बितिसक्दा पनि पानी नपरेपछि बाध्य भएर जनविश्वासमा आधारित भ्यागुताको विहे गर्नु परेको किसानहरुको भनाइ छ ।
कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएकी महिला जीवित भएपछि
सावधान ! पादबाट पनि कोरोना फैलिन
पादबाट पनि फैलिन सक्छ कोरोना
श्रीमतीलाई झुक्याएर प्रेमिका भेट्न पुगेपछि कोरोना
प्रेमिकाले ललितलाई बाइक नभएकोमा जिस्काएपछि
नेपालले जारी गरेको नक्सा अस्वीकार्य : भारत
नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या ६ सय ९९ पुग्याे
नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या ५ हजार..
सुर्खेतमा थप १२ जनामा कोरोना संक्रमण..
रुकुम पश्चिममा दलित युवाको हत्या आरोपमा वडाध्यक्षसहित १२ पक्राउ
बमबारीमा पनि नमर्ने हिटलरको गोहीको मृत्यु
सुसाइड नोटमा ‘म छिट्टै स्वर्गमा जाँदैछु’ लेखेर बालकले गरे आत्महत्या
बाँझो जमिनमा खेती गर्नेलाई मध्यनेपालले अनुदान दिने
भारतबाट पर्वत आएका २९ जनाको पिसिआर रिर्पोट नेगेटिभ
डब्ल्युएचओद्वारा मलेरियाको औषधीको प्रयोगमा रोक